Fiangonana Loterana Malagasy « Mila fifonana sy fibebaham-pirenena isika »
Manamafy ny fanambarana navoakan’ny Fiombonan’ny Fiangonana Kristianina eto Madagasikara (FFKM) ny Fiangonana Loterana Malagasy (FLM) nandritra ny Synoda lehibe faha-138 notanterahany tany Betafo-Antsirabe ny 18 – 19 desambra
RADIO FM FOI Hitory ny filazantsara amin’ny fiteny vahiny marobe indray
Hitory ny fahamarinana hatrany ny Radio FM Foi ato anatin’ny 20 taona ho avy hahafahana manavotra fanahin’olona maro.
Raharimala Andriampenotiana Mino fa hipetraka eto ny fanjakan’Andriamanitra
Hipetraka aorian’ny Repoblika faha-4 ny fanjakan’Andriamanitra ety an-tany araka ny hita ao amin’ny Daniela 7 :1-25. Io no lohatenin’ny boky misy takila 41 nosoratan’Atoa Raharimala Andriampenotiana filohan’ny fikambanana G.E.T.M na ny
FJKM Ambodihady Vaovao Mitohy ny fankalazana ny krismasy
Mitohy ny krismasy ao amin’ny FJKM Ambodihady Vaovao Ambohimanarina.
Filohan’ny FLM “Miantso fibebahana Andriamanitra !”
Ao anatin’ny fankalazana ny jobily faha-150 taona nidiran’ny misionera sy ny antsoina hoe reformasionina teto Madagasikara isika amin’izao fotoana.
Fiangonana FVKFM Nizara fanomezana ho an'ireo marary
Nizara fanomezana ho an'ireo olona sahirana sy ankizy marary miisa 250 manaraka fitsaboana etsy amin' ny hopitaly HJRA Ampefiloha ny Vondron'ny Kristianin'ny Fanahy Masina na ny FVKFM.
Katolika eto Madagasikara Fito taona tsy manana Kardinaly
Fito taona aty aorian’ny nahafatesan’ny Mgr Razafindratandra Armand Gaetan, Kardinaly farany teto Madagasikara, ho an’ny mpino katolika, dia banga mandrak’ity ny androany io toerana io. Nodimandry ny 9 janoary 2010 izy,